JINGHPAW KASA: ဖားကန့်ဝန်ထမ်းများအား ဗမာအစိုးရတာဝန်မယူကြောင်းနှုတ်မိန့်ထုတ်
တိုက်ပွဲများဖြစ်နေသော ဖားကန့်ဒေသတွင် ဗမာအစိုးရ၀န်ထမ်းများအား ၃ ရက်အတွင်း မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ပြန်ရန်၊ ထိုရက်ကျော်သွားပါက ၎င်းတို့၏ အသက်ကို အာမခံမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ လျှော်ကြေးပေးမည်လည်း မဟုတ်ဟုတ်ကြောင်း ဗမာအစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးမှ လူကြီးများက နှုတ်မိန့်ဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ၀န်ထမ်းလောကမှ သိရှိရပါသည်။ ဗမာအစိုးရ ၀န်ထမ်းများသည် ယခုကဲ့သို့ အစိုးရ၏ တာဝန်မယူမှုကို အလွန်မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ယခုအခါ လက်နက်အားကိုးဖြင့် ပြည်သူလူထုကို မတရား ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ရဲများ၊ စရဖ၊ ‘စ’ သုံးလုံး၊ မူးယစ်ရဲများ၊ မီးသတ်သမားများသည် မိမိတို့၏ တပ်စခန်း တွင်လည်းမအိပ်ရဲဘဲ ဆွေမျိုးများ၊ အသိမိတ်ဆွေများထံ လိုက်အိပ်နေရကြောင်း၊ အလွန်ထိတ်လန့် ဖြစ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဖားကန့်မှ ပြန်လျှင်လည်းမလုံခြုံ၊ ဆက်နေလျှင်လည်း အသက် အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရနှင့် သွေးလန့်နေကြပါသည်။ အစိုးရ၀န်ထမ်းအချို့မှာ ကတုံးတုံးပြီး ဘုန်းကြီးဟန်ဆောင်ကာ၊ အချို့မှာ မော်တော်ယဉ်တွင် သံဃာအလံထောင်ပြီး အချို့မှာ ခရီးသည်ဟန်ဆောင်ကာဖားကန့်မှ ထွက်ခွါနေကြပါသည်။ အစိုးရ၀န်ထမ်းများသည် ၀ဋ္ဋ်လည် နေသည်ဟု ဒေသခံအများကယူဆနေကြပါသည်။ KIA တပ်မဟာ ၂ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၆ မှ အရာရှိက လက်နက်မပါဘဲ ခရီးသည်အနေနဲ့ဆင်းရင်တော့ အားလုံးကို ခွင့်ပြုပါတယ်၊ လုံခြုံရေးအရတော့ စစ်ဆေးမှုတော့ရှိပါတယ် ဟုပြောကြားလာပါသည်။ ယခုအခါ ဗမာအစိုးရတပ်တို့ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ထိုးစစ်ဆင်နေသဖြင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ကိုးထောင်ကျော်လာပြီး ပြည်သူ အများ ဖားကန့်ဒေသအားစွန့်ခွာနေကြပါသည်။
WP hpyen Yen tsinyam ni hpe pyi laja lana gawt ai Myiwa ni hpe anhte Hpakan ga na mung laja lana gawt kau ra na re. Hpakan de majan byin wa hkra mung myen hte myiwa ni KIO/KIA hpe warhpan nkam bang ai majaw myen atsuya hpe shijaw ai majaw byin majan byin hkra mung shan hte hpang dat ya ai majan re. Dai majaw myiwa hte myen hpe laja lana gawt kau ra ai ngu mu mada ai law.
MI WA NGA JANG GAWT,,,,,,MYEN NGA JANG GAWT,,,,,
Yawng hpe jep nna rim zing da mu. Shan hte laja lana nga wa ai aten hta bai jai lang ra na re.
Masha shada bai galai ra ai ten hkan na matu law law shye naw rim da mulu.zen ga yaw.
Simsa lam la da ai ten k.i.a hpe myen niawansat dap ayan mitat ram pi nhkrit , nhkungga shanglawt hpen dap hpe hpa zawn nnawn ai ndai myen miwa ni hpe ya atsawm sha sharin shaga mu, myen hpen du ni hpe sha masha shadu ai ndai miwa ni hpe nut mu, gau kau mu.
majoi aming chyu n jaw hkat ga, nang nan mung shang lawm na galaw ga i.
Myen hte miwa ngu ai ni gaw abaw ni bye ya,Maidang ni htawng ya rai jang she ga kaja pru wa ai re.